Abiy wuu Ku Fashilmay Dhexdhexaadinta Somaliland & Somalia | Marsa News
Abiy wuu Ku Fashilmay Dhexdhexaadinta Somaliland & Somalia
May 31, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Wargeyska The reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, ayaa sheegay in dedaalkii uu Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed ku doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo Somaliland iyo Soomaaliya uu fashilmay.
Wargeyska The reporter oo shalay warbixin ka qoray hub ay dawladda Masar ugu deeqday dawladda Soomaaliya, ayaa warbixintiisa ku soo hadal qaaday wada hadaladii uu Abiye Axmed ka dhex waday Somaliland iyo Soomaaliya oo uu wargeysku sheegay inay fashilmeen, labada dhinacna diideen inay si toos ah isu arkaan.
Wuxuu ugu horayn wargeyska xogo’ abni oo uu soo xigtay u sheegeen in hubkaasi khatar ku yahay ammaanka gobalka oo marka horeba culaysyo ammni daro la ciirciirayay.
Wuxuu soo hadal qaaday wasiirka gaashaandhiga Somaliland Cabdiqani Caateeye oo qoraal uu ku qoray twitterkiisa ku cambaareeyay hubkan.
Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa iyaduna diiday inay ka jawaabto aragtida Itoobiya ee hubkan, laakiin xogahan uu wargeysku soo xigtay ayaa sheegay inay tahay inay dawladda Itoobiya dib u qiimayso xidhiidhka ay la leedahay qaar ka mid ah wadamada jaarka oo aanu wargeysku magacaabin.
Wargeyska oo ka hadlaya dedaaladii Abiye Axmed ee isu soo dhawaynta Somaliland iyo Soomaaliya, wuxuu ku soo gunaanaday warbixintiisa, “Bilihii u dambeeyay Soomaaliya iyo Somaliland waxay is dhaafsanayeen hadalo kulul, dhexdhexaadintii Abiye Axmed uu sameeyayna way fashilantay, iyadoo ay labada dhinacba diideen inay si toos ah isu arkaan.” Ayuu yidhi Wargeyska The reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa.
Masar iyo Itoobiya ayaa si weyn isugu maandhaafsan biyo xidheenka ay Itoobiya dhisatay oo ay doonayso inay buuxiso bilahan, kaas oo ay Masarna u aragto khatar soo waajahaysa nolosha shacabkeeda oo ku tiirsan biyaha webiga Niilka, waxaana labada dal ay ku jiraan dedaalo diblomaasiyadeed oo ay doonayaan inuu midba midka kale ku muquuniyo.
Halka wararka qaarna ay sheegayaan inay muuqato saansaan diyaar garow colaadeed oo dagaal horseedi kara.